ဖူးနုသဈ: ရောငျးကုနျတှေ ပုံစံကှဲရတဲ့ အကွောငျးရငျး
ဝေးဟေးဟေး ။ ကိုစိုးမင်းနည်းလမ်းနဲ့ အဆင်ပြေသွားပြီ။ (Font ထည့်ပေမယ့် ဘာကွိုင်နေမှန်းကို မသိ။)
ဒီလိုပိစိပွစိလေးတွေမှာလည်း သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ကိုး......... ရှာနိုင်ပေ့။ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ဘာပစ္စည်းထုတ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိလဲ။
kyiphyupaing-> Please download Font package here, unzip it and copy to your C:\_WinNT\_Fonts.
It is justapiece of cake :D
ကော်မန့်ပေးလို့ ရသွားပါလား။ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲ။
If you put cocacola in square bottle, when you shake it will explode.
rounded one has stronger than square.
Thats why nuclear reactor tanks has rounded one.
# ကိုင်ရတာလွယ်ကူခြင်း is not main issue.
အင်ဂျင်နီယာဆိုတာ ဒါကိုး လို့ စိတ်ထဲအောက်မေ့သွားပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ ကိုဇက်တီဟာတွေ ဖတ်မိရင် ယူထားတဲ့ ဘွဲ့တောင် ပြန်အပ်ချင်တယ် တကယ်။
ရုံးမှာ bracket design တွေ 10mm ပိုရှည်သွားလို့.. နောက်မှ ပြန်ချိန်ကြည့်တော့ .. လွန်သွားပြီ။ :)
Noe Wai said...
ဒီblog ကို ဘာလို့များ wide screen နဲ့ဖတ်မှအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတာလဲမသိဘူးနော် .. ကို ZT သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက နောက်ဆုံးပေါ် notebook တွေပဲသုံးကြလို့လားမသိဘူး.. J/k :)
အားပါးပါး .. အစ်ကိုရေ့.... ရှာရှာဖွေဖွေ လည်းသိပါ့ဗျား...
wide screen လဲဖတ်မရ..ဘယ်လိုမှဖတ်မရဘူး.. လုပ်ပါအုံးး...
ဘာမှလဲမမြင်ရဘူး..ကွိစိကွစိလေးတွေဘဲတွေ့ရတယ်.. အကို့ဘလော့ဖတ်ဖို့ ဖောင့်သတ်သတ်ထည့်ရမှာလားဟင်..
Please install that font. Download link is located at top right corner. After installing Unicode font, you can read Myanmar Wikipedia too. :D
Ald installed fonts n read this one hal hal just so u kno =D
Font size is ok but line height is kinda problem for me to read. just so u kno again =D
Padauk Font နဲ့ တော့ ဖတ်လို့ ရသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် size တော်တော်သေးတော့ နည်းနည်းပြူးပြီး ဖတ်ရတယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေသဗျ။